Tag: xog nadiifinta | Martech Zone
Tag: xog nadiifinta
Ma maqlaysaa qeylada? Wow .. Jenn Lisak waxay sameysay markii ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka meelaha laga iibsado liisaska ganacsi ee saxda ah. Qaylada xanaaqa waxay ahayd mid deg deg ah oo hay'adeena xitaa hal qof ayaa ku tilmaamay anshax xumo. Tweets-ka waxay ahaayeen kuwo aad u qosol badan oo Jenn ka saaray Tweet-ga isla markaana joojiyay wadahadalkii. Markii Jenn ii sheegtay falcelinta, runtii waan xanaaqay. Marka hore, kaftanka qof ku jira madal suuq geynaysa oo iibinaysa xogteeda